Serchen: Igwe ojii igwe nyocha gị na nyocha saịtị | Martech Zone
The Serchen ọrụ n'ọma ahịa karịrị ndị na-ere 10,000 na ọtụtụ nde ndị na-azụ ahịa kwa afọ. Ebumnuche ha bụ ịmepụta nnukwu nchekwa data nke ọkwa na nyocha nke ga-ejikọ ndị na-azụ ahịa na ndị na-ere ahịa na igwe ojii kachasị mma na ngwanrọ na ngalaba IaaS, PaaS na SaaS.
YaaS - Akụrụngwa dịka Ọrụ bụ ihe eji eme ndokwa nke otu nzukọ na-enyefe akụrụngwa ejiri kwado ọrụ, gụnyere nchekwa, ngwaike, sava na netwọkụ. Onye na-ahụ maka ọrụ nwere akụrụngwa ma ọ bụ ọrụ maka ụlọ, na-agba ọsọ ma na-echekwa ya. Ndị ahịa a na-akwụkarị ụgwọ na-eji ya eme ihe.
SaaS - Software dị ka a Service bụ ihe eji ekesa ngwanrọ nke ndị na-ere ahịa ma ọ bụ ndị na-eweta ọrụ kwadoro ngwa ma nye ndị ahịa ohere ịntanetị, ọkachasị ịntanetị.
PaaS - Platform dị ka Ọrụ bụ ụzọ ịgbazite ngwaike, sistemụ arụmọrụ, nchekwa na ikike netwọkụ na thentanetị. Deliverydị nnyefe ọrụ na-enye ndị ahịa ohere ịgbazite sava ndị emechara emezi na ọrụ ndị metụtara ya maka na-agba ọsọ ngwa dị ugbu a ma ọ bụ na-emepe emepe ma na-anwale ndị ọhụrụ.
Saịtị na-tọrọ ọma, nkewa n'ime nyiwe omume ọma… ma nwere a n'ezie ọgụgụ isi search mmanya nke ịchọta nyiwe gị mkpa. Echere m na a ka nwere ọtụtụ ngwa ọdịnala na-efu (n'ezie, anyị enweghị ngwa ọ bụla ewepụtara ebe a, ma either nke ahụ ga-afọ nke nta ka ọ gaghị ekwe omume) na nyocha dị ezigbo omimi n'oge ahụ; agbanyeghị, ọ bụ nnukwu ọmarịcha ụzọ dị mma iji wuo ebe nchekwa data dị ka nke a!
Debanye na Serchen ma nyochaa ngwa ndị ị hụrụ n'anya - ma chọpụta karịa!
Nkọwa si Nchọgharị CloudWoogle.
Tags: igwe ojiiigwe ojii nyochaa softwarenkeanyocha teknụzụ ahịapaasnyiwe nyiweNtụleNyochasaasozi
Amụma 2014 maka Mobile Web Trends